UZuma utshele iSACP ukuthi uyamxosha uGordhan, kusho imithombo | News24
UZuma utshele iSACP ukuthi uyamxosha uGordhan, kusho imithombo
Johannesburg – UMengameli Jacob Zuma utshele amalungu aphezulu eSouth African Communist Party (SACP) ukuthi uhlela ukuxosha uNgqongqoshe wezeziMali, uPravin Gordhan, ngokusho kwabantu abathathu abanolwazi ngalolu daba.
UZuma utshele lezi zikhulu ze-SACP, edlelana ne-African National Congress (ANC), emhlanganweni obungoMsombuluko eGoli, ngokusho kwabantu abebekhona kodwa abacele ukuthi bangadalulwa ngenxa yokuthi isitatimende esisemthethweni asikenziwa.
UZuma uyalele uGordhan ukuthi anqamule imihlangano abeyihlelile nabatshali bezimali e-UK kanye nase-US bese ebuyela ekhaya ngoMsombuluko, ngemuva kosuku ethathe indiza ebheke eLondon ngenhloso yokuqala imihlangano ewuchungechunge nabatshali bezimali.
Ekuhambeni kosuku ngoMsombuluko bekulindeleke ukuba kube nomhlangano wabaholi abangu-6 abaphezulu be-ANC ngemuva komhlangano we-SACP kanti akucaci ukuth yini ehlalukile kulo mhlangano. Okhulumela i-ANC, uZizi Kodwa, uthi abantu bathole ulwazi okungesilona.
“Angazi noma kuyiqiniso yini ukuthi uGordhan uzoxoshwa,” kusho oyiNhloko yemigomo yezomnotho ku-ANC, u-Enoch Godongwana.
“Uma lokho kungenzeka, kungaba yinhlekelele kwezomnotho.”
Ngokusho kwabantu abebekulo mhlangano waZuma neCommunist Party, uZuma uthe usethathe isinqumo sokuthi amxoshe uNgqongqoshe uGordhan ngoba ungumengameli onomsebenzi wokuhola uhulumeni futhi uGordhan uyamvimbezela.
Ukuxoshwa kukaGordhan kungase kubanjezelwe ukuthi izikhulu ze-ANC zizobe zimatasa nokulwisana nesishoshovu esasilwisana nohulumeni wobandlululo esidlule emhlabeni ngoLwesibili, u-Ahmed Kathrada.